Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.3.9 Adala
Ny mpikaroka sasany dia mino fa loharano lehibe, indrindra ireo loharanom-pitaovana, dia tsy misy dikany satria voangona izy ireo. Raha ny marina, ireo olona izay niasa tamin'ny loharanom-baovao lehibe dia mahalala fa maloto matetika izy ireo . Izany hoe, matetika izy ireo dia ahitana angon-drakitra izay tsy mampiseho ireo asa tena mahaliana ny mpikaroka. Ny mpahay siansa sosialy dia efa mahazatra ny dingana amin'ny fanadiovana ireo angona sosialy lehibe indrindra, saingy toa sarotra kokoa ny manadio ireo loharanom-baovao lehibe. Heveriko fa ny loharano lehibe indrindra amin'ity fahasahiranana ity dia ny ankamaroan'ireo loharanom-baovao lehibe ireo dia tsy natao hampiasaina amin'ny fikarohana, ka noho izany dia tsy voangona, voatahiry ary voarakitra izy ireo amin'ny fomba izay manamora ny fanadiovana ny angona.
Ny loza ateraky ny angon-drakitra nomerika malaza dia asehon'ny valin'ny Back sy ny mpiara-miasa (2010) momba ny fihetseham-po ara-pihetseham-po tamin'ny fanafihana tamin'ny 11 septambra 2001, izay noresahiko tetsy aloha tao amin'ny toko. Ny mpikaroka dia mianatra matetika ny valin'ny fampisehoana mahatsiravina amin'ny fampiasana angon-drakitra nangonina nandritra ny volana maro na taona maro. Fa, niverina sy mpiara-miasa no nahita loharanom-panafody nomerika foana - ny fotoana voatahiry, dia nalefa avy hatrany ireo hafatra avy amin'ny pager-amerikana 85.000 ary izany dia nahafahan'izy ireo nandalina ny fihetseham-po ara-pihetseham-po tao anatin'ny fotoana fohy kokoa. Namorona torolalana ara-pihetseham-po isa-minitra izy ireo ny 11 septambra tamin'ny alalan'ny famoahana ny votoatin'ny hafatra pagera amin'ny ampahany amin'ny teny mifandray amin'ny alahelo (ohatra: "mitomany" sy "alahelo"), (2) ahiahy ( ohatra, "manahy" ary "matahotra"), ary (3) fahatezerana (oh: "mankahala" ary "manakiana"). Hitan'izy ireo fa ny alahelo sy ny tebiteby dia niova nandritra ny tontolo andro tsy nisy lamina mahery vaika, saingy nisy ny fitomboan'ny fahatezerana nandritra ny andro. Ity fikarohana ity dia toa sarobidy mahavariana momba ny herin'ny loharanom-baovao hatrany: raha toa ka nampiasaina ny loharanom-baovao nentim-paharazana, dia tsy ho vita ny nahazo izany valim-panafoanana izany ho an'ny valim-panontaniana mivantana amin'ny hetsika tsy ampoizina.
Herintaona taty aoriana, Cynthia Pury (2011) nijery ny tahirin-tsarimihetsika kokoa. Hitany fa maro amin'ireo hafatra lazaina fa tezitra no nateraky ny pager tokana ary izy ireo dia mitovy. Izao no nolazain'ireo hafatra lazaina fa tezitra ireo:
Ireo hafatra ireo dia nalaza ho tezitra satria nampidirin'izy ireo ny teny hoe "CRITICAL", izay mety manondro fahatezerana amin'ny ankapobeny fa tsy amin'ity raharaha ity. Ny fanesorana ireo hafatra nalefan'ity piraofilin'ny solosaina tokana ity dia nanala tanteraka ny fisehon'ny fahatezerana nandritra ny andro (2.4). Amin'ny teny hafa, ny vokatra fototra ao Back, Küfner, and Egloff (2010) dia karazana pager iray. Araka ny asehon'ity ohatra ity, ny famakafakana tsotra momba ny angon-drakitra tsotra sy madio dia manana ny mety hisorohana ny tsy rariny.
Sary 2.4: Tombana mivaivay amin'ny hatezerana nandritra ny 11 septambra 2001, miorina amin'ny pagers Amerikana 85,000 (Back, Küfner, and Egloff 2010, 2011; Pury 2011) . Tany am-boalohany, Back, Küfner, and Egloff (2010) nitatitra ny làlam-pandrosoana hatezerana nandritra ny andro. Na dia izany aza, ny ankamaroan'ireo hafatra mahatsiravina ireo dia novokarin'ny mpitendry tokana izay naverimberina nandefa izao hafatra manaraka izao: "Masera Reboot [anarana] amin'ny anaran'ny [cabinet] [toerana]: CRITICAL: [daty sy ora]". Miaraka amin'io hafatra io (Pury 2011; Back, Küfner, and Egloff 2011) fahatezerana (Pury 2011; Back, Küfner, and Egloff 2011) . Nifanaraka tamin'ny Pury (2011) , sary 1b.
Raha sendra misy tahiry maloto izay noforonina tsy am-pisalasalana - toy ny avy amin'ny mpihira iray malamaloka - dia azo tsapain-dry mpikaroka iray tsara, misy ihany koa ireo rafitra an-tserasera an-tserasera izay manintona mpitsikilika. Ireo solom-bavam-bahoaka ireo dia mamoaka fampahalalam-baovao sandoka, ary matetika no manosika mafy ny asa mahasoa mba hialana amin'ny fialokalofany. Ohatra, ny hetsika ara-politika ao amin'ny Twitter dia toa misy sombin-tsarimihetsika mahavariana farafaharatsiny, izay mahatonga ny antony ara-politika sasany atao amin'ny fijery malaza kokoa noho ny tena izy (Ratkiewicz et al. 2011) . Mampalahelo fa mety ho sarotra be ny manala io spam intérieure io.
Mazava ho azy fa miankina amin'ny antontam-panadihadiana ny hevi-baovao maloto. Ohatra, fanovana maro ho an'ny Wikipedia no noforonina tamin'ny buga automatique (Geiger 2014) . Raha liana amin'ny resaka momba ny tontolo iainana ao amin'ny Wikipedia ianao dia manan-danja ireo fanitsiana vita bot. Fa raha liana amin'ny fanoloran-tenan'ny olombelona amin'ny Wikipedia ianao, dia tokony esorina ny fanitsiana vita amin'ny bot.
Tsy misy teknika statistika tokana na fomba iray ahafahana manome antoka fa nanadio tanteraka ny angoninao ianao. Amin'ny farany, mihevitra aho fa ny fomba tsara indrindra hialana amin'ny famoahana ny angona maloto dia ny mahatakatra betsaka araka izay azo atao mikasika ny fomba namoronana ny angona.